ကဗျာချစ်သူ (ခေးရော့စ်): အိပ်စက်ခြင်းဟုဆိုရာဝယ်.........
Posted by Chaos at Saturday, September 20, 2008
Republic September 21, 2008 at 12:15 AM
ခုလိုဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါ မခေးရော့စ် ၊၊ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျော်နိုင်ပါစေဗျာ ၊၊
လင်းဦး(စိတ်ပညာ) September 21, 2008 at 1:44 AM
လူတစ်ယောက်မှ အိပ်စက်ခြင်းဟာလည်း အရေးးကြီးပါတယ်.. အခုလိုမျှဝေတော့ အားလုံးလည်း ဗဟုသုတကြွယ်ဝတာပေါ့။ အရေးကြီးမှန်း သိရပြီပေါ့။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ
မိုးကြယ် September 21, 2008 at 9:10 PM
ဟုတ်လိုက်လေကွယ်။ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါလို့ ရုံးမရောက်ပေါင်းလည်းများလှပါပြီ။ :P
LIN LET KYAL SIN September 22, 2008 at 9:22 AM
အိပ်မပျော်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ လူတိုင်းမှာ မတူညီစွာ ရှိနေနိုင်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်မမရေ။ သိသလောက် အကြံပေးပါရစေ။ အိပ်မပျော်ဘူးဆို၇င် မအိပ်ခင် တစ်နာရီလောက်အလိုမှာ နွားနို့ပူပူလေး တစ်ခွက်လောက် သောက်ကြည့်ပါလား။ ညနေခင်းနေ၀င်ချိန်လောက်မှာ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ အားကစားတစ်ခုခုကို နာရီဝက်လောက် အနည်းဆုံးလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်လည်း ညခင်းဘက်မှာ ပင်ပန်းမှုနဲ့ အိပ်ချင်စိတ်က စောစောဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ စိတ်ပင်ပန်းမှုနဲ့ ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာရင်တော့ သင့်တော်သော စာအုပ်ကောင်းတစ်ကောင်းဖတ်ပြီး စိတ်ကိုလျှော့ချ အိပ်ယာပေါ်မှာလှဲနေရင်လည်း အိပ်ပျော်တတ်ပါတယ်။ တခါတလေ စိတ်ထဲမှာ တခုခုကို လျှော့ချမရရင် စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်မှာ ရေးချင်တာ ရေးလိုက်ရင်လည်း စိတ်ပြေသွားတတ်ပြီး အိပ်ချင်လာပါတယ်။ ဘုရားစာရွတ်ပြီး မျက်လုံးတွေကိုမှိတ်ထားရင်လည်း ကြာရင် အိပ်ပျော်သွားတတ်ပါတယ်။
ကိုယ်လုပ်လေ့ရှိတာတွေကို မမအတွက် အသုံးဝင်မလားလို့ မျှဝေအကြံပြုကြည့်တာပါမမ ..။ ကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်နိုင်ပါစေ :)
su wai September 22, 2008 at 12:26 PM
ဆုဝေလဲ ခုတလော အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေ ကြုံနေရတယ် ခေးရော့ရေ ... ဟိုတွေးဒီတွေး အတွေးတွေများပြီး တော်တော်နဲ့ အိပ်မရတော့ဘူး ... အဲဒါနဲ့ ဘာမှမတွေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီး ဘုရားစာလေးမှတ်၊ ဒီလိုနဲ့မှ အိပ်မပျော်တော့လဲ ဆေးထသောက်ရတော့တာပဲ။ မနက်အလုပ်သွားရမှာဆိုတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အိပ်ပျော်သွားရင်ပြီးရော ဆိုပြီး ... သဘာဝအတိုင်း အိပ်တာမဟုတ်လို့ ကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့ ... ခေးရော့ပြောသလိုပဲ စိတ်အေးလက်အေး အိပ်ပျော်နိုင်ကြတဲ့သူတွေကို အားကျမိတယ် :)
ဝေလေး September 25, 2008 at 4:50 PM
ဟုတ်တယ်မမရေ. ခုတစ်လော အိပ်မပျော်တာအမှန်ပဲ ကဗျာတွေစာတွေရေးတာ နေ့ခင်းဘက်ဆိုမရေးတတ် .. ညမှရေးတော့ အိပ်ရေးပျက်ရော. ပြီးတော့ အိပ်ချင်တိုင်းလည်း အိပ်ပျော်တာမဟုတ်.... ခက်တယ်နော် :P